Izandiso ezinhle kakhulu ze-GNOME | Kusuka kuLinux
Isaka | | Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso, I-GNU / Linux
Uma usebenzisa I-GNOME ekusatshalalisweni kwakho kwe-GNU / Linux, uzokwazi ukuthi ngaphezu kwalokho imvelo yedeskithophu ekuvumela khona, ungangeza ukusebenza okuningi ngokufaka izandiso zale desktop. Ngazo, imisebenzi emisha izovela kusixhumi esibonakalayo sakho sokuqhafaza okungaba usizo kakhulu emsebenzini wakho wosuku nosuku. Ezikhathini eziningi, ukwenza lula imisebenzi okwenzayo nsuku zonke.
Ukuze wazi ezinye izandiso ezisebenza kakhulu ze-GNOME, lapha ngengeza uhlu. Kunezinye eziningi, kepha ngikhethe ezinye engizizamile noma ngazisebenzisa kaningi ngoba zibonakala zisebenza kakhulu. Ngenxa yabo, ngikwazile ukunciphisa isikhathi sokusebenza kwezinye izimo, ngathuthukisa umkhiqizo. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ziyini? Qhubeka ufunde…
La list ngezinye zezandiso ezisebenza kakhulu nokuthi uzoyithanda, yilezi:
ImageMagick: isandiso esisebenzayo esengeza imenyu ku-GNOME lapho ungashintsha kalula izithombe. Kumele ukhethe isithombe noma izithombe ofuna ukuzikhulisa, bese uchofoza kwesokudla, ukhethe u-Resize Images. Imenyu iyavula futhi ungabeka usayizi owufunayo, amaphesenti, njll.
Isikhathi sePodomoro: ikuvumela ukuthi uhlele uchungechunge lwezikhathi zomsebenzi nokuphumula ukuze uhlele umsebenzi wakho. Ngaleyo ndlela, ungagxila kulokho okwenzayo futhi kuzokwazisa ngezaziso lapho udinga ukuthatha ikhefu noma ukuphumula.
Iphrojekthi Hamster: Ngokufana neyangaphambilini ngokwezinsiza, ikuvumela ukuthi uthuthukise umkhiqizo wakho ngokubonisa ukuthi usisebenzisa kanjani isikhathi sakho endaweni yakho.
Caffeine: Noma angiyisebenzisi njengamanje, omunye umsebenzisi angakuthola kusebenza ukwenza Ubuntu noma i-GNOME distro yakho ingangeni kwimodi yokulala. Uma ufuna ukugcina imvelo yakho ihlale "ivukile" ungahle ube nentshisekelo.
Vuselela ukuxhumana kwe-WiFi: Uma usuka kwenye indawo uye kwenye une-laptop yakho, ungahle ube nentshisekelo endleleni yokuvuselela ukuxhumana okungenawaya kutholakale kalula ukuze ixhumeke ngokuzenzakalela ngaphandle kokwenza ngesandla. Ngalesi sandiso ungakwazi.
Easy Screencast: isandiso esilula ukurekhoda okwenzekayo kudeskithophu yakho ngendlela elula. Ngakho-ke ngeke kudingeke ube nohlelo lwayo, vele usebenzise lesi sandiso esingasindi.
I-OpeWeather: Uma ukhathazekile ngesimo sezulu, ungasebenzisa lesi sandiso ukukhombisa isimo sezulu endaweni yangakini.
Umphathi webhodi lokunamathisela: isandiso esikuvumela ukuthi uphathe kangcono ibhodi yakho yokunameka uma ungomunye walabo abasika futhi banamathisele okuningi. Ikuvumela ukuthi ube nezinto ezithile ezikopishiwe noma ezisikiwe ezitholakalayo bese uziphethe ... Uma usebenzise uhlelo lokusebenza lwe-GPaste, lesi sandiso siyindlela ehlukile ekuso, futhi sinemisebenzi efanayo.
Amasiko ashisayo ngokwezifiso: ku-GNOME kuphela inketho ekhombisa imisebenzi namawindi avulekile ekhoneni eliphezulu kwesobunxele iyasebenza. Kepha ngalokhu kunwetshwa kusebenza kuwo wonke amakhona amane.
Iphephadonga Elingahleliwe: Ngeqiniso angisayisebenzisi, kepha osukwini lwayo ngiyenzile futhi ikuvumela ukuthi ube nezizinda eziningana zedeskithophu. Ngalesi sandiso uzoshintsha phakathi kwezizinda ezahlukahlukene ngokuzenzakalela futhi ngaleyo ndlela uguqule imibono onayo.
I-Dash To Dock: Uma ungathandi i-GNOME ukoma, futhi uphuthelwa ubumbano, ungasebenzisa lesi sandiso esengeza i-Dock enhle kudeskithophu yakho lapho ungamisa khona izinhlelo zokusebenza ozisebenzisa kakhulu futhi uzinikeze okuhlukile.
izandiso: isandiso esikuvumela ukuthi uphathe ezinye izandiso. Ngayo uzokwazi ukunika amandla noma ukhubaze izandiso ze-GNOME ozifakile, uma kwenzeka ungadingi noma ngasiphi isikhathi kepha awufuni ukuyikhipha unomphela ukuze iqale kabusha kalula ngokuzayo .
Izindikimba Zabasebenzisi: isandiso sokukwazi ukuphatha ukubukeka kwe-GNOME yakho ngamatimu. Ngaleyo ndlela, ngeke kudingeke uye kwamanye amamenyu noma izinsiza futhi uzoba nakho konke okwengeziwe ukuze ushintshe ngokushesha phakathi kwezihloko ezahlukahlukene.
Ngiyethemba ngikusizile ngalokhu kukhetha. Uma ufuna ukufaka isandla kwabanye obasebenzisa kaningi noma othanda ikakhulukazi, unganqikazi ukushiya i- imibono...
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » Izandiso ezinhle kakhulu ze-GNOME
IKaOS Linux ithola i-KDE Plasma 5.16 neLinux Kernel 5.1
Inguqulo entsha ye-SUSE Linux Enterprise 15 SP1 ikhishiwe